China Salmonella ule na-emepụta na ngwaahịa | Na-adanye Bio
Nnukwu uche (89.8%), nkọwa (96.3%) gosipụtara site na nnwale nyocha 1047 na 93.6% nkwekọrịta ma e jiri ya tụnyere usoro ọdịnala.
Mfe na-agba ọsọ
Usoro otu usoro, enweghị ọkachamara pụrụ iche achọrọ.
Naanị 10 nkeji chọrọ.
Ime ụlọ okpomọkụ nchekwa
Kit Size = ule 20
Faịlụ: Akwụkwọ ntuziaka / MSDS
Salmonella bụ nje na-akpata otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma (eriri afọ) ọrịa na ụwa - Salmonellosis. Ma otu n'ime ihe ndị kasịọrịa nje a na-ebutekarị na-efe efe na-akọ (na-adịkarị obere oge karịa Ọrịa Campylobacter). Theobald Smith, chọpụtara ụdị mbu nke Salmonella – Salmonella cholerae suis – in 1885. Kemgbe ahụ, ọnụọgụ nke ụdị (akpọrọ nke akpọrọ serotypes or serovars) nke Salmonella mara amara ime salmonellosis nwere mụbara ruo ihe karịrị 2,300. Salmonella typhi, nje nke na-ebute ahụ ọkụ,Ọ bụ ihe nkịtị na mba ndị na-emepe emepe ebe ọ na-emetụta ihe dịka nde mmadụ 12.5 kwa afọ, Salmonella enterica serotype Typhimurium na Salmonella enterica serotype Enteritidis na-ekwukarị ọrịa. Salmonella nwere ike ibuteụdị ọrịa atọ dị iche iche: afọ ọsịsa, ọrịa ịba ahụ́ ọkụ, na bakteria. Nchoputa nke Salmonellosis nwere nkewaputa nke bacilli na ngosipụta nke-alụso ọrịa ọgụ. Mwepu iche nke bacilli na-ewe oke ogena nchọpụta antibody abụghị kpọmkwem.
Salmonella Antigen Rapid Test na-achọpụta Salmonella site na anya nkọwa nke mmepe agba na eriri ime. Emegide salmonellaA na-egbochi nje ndị ọzọ na mpaghara ule nke akpụkpọ ahụ. N'oge ule, ihegbasirila na-emeghachi omume na mgbochi salmonella alụ ọgụ conjugated ka acha ahụ ma precoated na conjugate pad nke ule. Ngwakọta ahụ na-akwagasite na akpụkpọ ahụ site na okpu edinam na mmekọrịta na reagents na akpụkpọ ahụ. Ọ bụrụ na e nwere salmonella zuru ezu na ụdị ahụ, otu agba nwere agbana-etolite na mpaghara ule nke akpụkpọ ahụ. Ọnụnọ nke agba agba ana-egosi nsonaazụ dị mma, ebe enweghị ya na-egosi nsonaazụ na-adịghị mma. Naọdịdị nke otu agba agba na mpaghara njikwa na-eje ozi dị ka njikwa usoro, na-egosi na agbakwunyela olu kwesịrị ekwesị nke mpempe akwụkwọ na akpụkpọ ahụ ọgbaghara emeela.
Nke gara aga: Nnwale Rotavirus
Osote: Vibrio cholerae O1 Ule
Salmonella Antigen Rapid Ule
Salmonella Typhi Antibody Nnwale Nnwale
Akwụkwọ akụkọ Coronavirus Rapid Test Ket, H. Pylori Ag Ngwa Ule Na-achọpụta Antigen, Igm / Iggrapid Ule Nnwale, Coronavirus Maka Covid-19 Ule, Coronavirus Antigen Nnwale Ngwa, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Nnwale Nnwale,